लास पोल्ने मूर्दाघाट मात्रै हो र देवघाट? - Everest Dainik - News from Nepal
लास पोल्ने मूर्दाघाट मात्रै हो र देवघाट?
काठमाडौंः प्रचण्डले ‘देवघाट’ शब्द प्रयोग गर्दा यसले चौतर्फी चर्चा बटुलेको छ । एकथरिले उनको यो भनाईलाई विशुद्द राजनीतिक रुप दिँदै विरोध समेत गरिरहेका छन् ।
तर प्रचण्डले देवघाटको चर्चा गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । गत वर्ष समेत देवघाट गएको बेला प्रचण्डले “आफूलाई पनि देवघाट आएर बस्न मन छ” भनेको विषयले चर्चा पाएको थियो ।
आखिर के हो देवघाट ? के यो लास पोल्ने मुर्दाघाट मात्रै हो ? के छ देवघाटको महत्व ?
देवघाट चितवनस्थित नारायणी नदी किनारमा रहेको एउटा धार्मिक स्थल हो । प्रचण्डले यही देवघाटमा जानुपर्ने कुरा गरेपछि अहिले उनी विवादित बनाइएका छन् । तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरुका लागि प्रचण्डको भनाईले भने विरोध गरिए भन्दा फरक अर्थ राख्दछ ।
हिन्दू धर्म अनुसार, मानिसको जीवनका मुख्य चार आश्रम रहेका छन् भने जन्मदेखि मृत्युसम्म कैयन् संस्कार निर्धारित गरिएका छन् । सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउन तथा समाजलाई गतिशील बनाउन यी आश्रम र संस्कारहरुको बेग्लै महत्व हिन्दू धर्मले दर्शाएको छ ।
सांसारिक सुखदुख भोगपछि सबै प्रकारका ऋणबाट मुक्त भएको अवस्थामा तेश्रो आश्रमका रुपमा वानप्रस्थलाई लिईएको छ । वानप्रस्थ भनेको जंगल जानु नभई पारिवारिक बन्धनबाट मुक्त भएर सामाजिक बन्धनतर्फ जानु हो । हिन्दु धर्मको चौधौं संस्कारका रुपमा परिवारमा तेश्रो पुस्ताको उदय भएपछि पारिवारिक बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मानव जीवनलाई सय वर्षमा विभाजन गरेर हरेक २५ वर्षमा नयाँ आश्रममा प्रवेश गर्ने नियम अवलम्बन गर्दा यसले परिवार, समाज र स्वयम् व्यक्तिलाई सजिलो किसिमले मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ ।
५० वर्षको उमेरमा वानप्रस्था शुरु हुन्छ । त्यसपछिका २५ वर्ष भने सामाजिक जीवन हो । यसमा व्यक्तिले समाज र देशका लागि योगदान दिने गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । र, यही सामाजिक जीवनले व्यक्तिलाई सन्यासको चरणमा पुर्याउँछ । अब व्यक्ति पारिवारि र सामाजिक भन्दा पनि सन्यासको अवस्थामा पुग्छ । उसले निर्वाणको मार्ग समात्ने गर्दछ ।
यही मान्यताका आधारमा सन्यासपूर्ण जीवनलाई समेत सहज बनाउन कैयन मठ मन्दिरमा सोही अनुरुपको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यस्ता स्थानमा व्यक्ति सबै प्रकारका सांसारिक चिन्ता, क्लेश, मोह र ममताबाट टाढा रहेर भगवानसँग निकटता बढाउन पुग्छ । भजन कीतर्न, ध्यानको माध्यमबाट मोक्षमा पुग्न खोज्दछ । त्यसैले सन्यासको जीवनका लागि काशी वनारस जस्ता नदी किनारहरु उपयुक्त मान्दै आएको छ धर्ममा । नेपालमा पनि वृद्दावस्थाका लागि पशुपति, देवघाट जस्ता कैयन यस्ता धार्मिक स्थानको निर्माण यही मान्यताका आधारमा भएका हुन ।
याे पनि पढ्नुस सचिवालय बैठकअघि ओली–प्रचण्ड भेट्दै
लास पोल्ने घाट मात्रै होइन देवघाट?
हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले सामाजिक परम्परलाई सहजता दिन नदी किनारमा यस्ता कैयन घाट बनाउने क्रममा देवघाटमा पनि परापूर्वकालदेखि नै देवघाटको निर्माण गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा भने गण्डकी अञ्चल मा रहेको तनहुँ जिल्लाको देवघाट, लुम्बिनी अञ्चलको नवलपरासीमा रहेको गैंडाकोट र नारायणी अञ्चलको चितवनमा रहेको भरतपुरको संगम स्थलमा देवघाट रहेको छ । यो दे कालीगण्डकी र त्रिशुलीको संगम स्थल मा पर्दछ । समस्त हिन्दू धर्मावलम्वी हरूको पवित्रस्थल देवघाटधाम हिन्दूहरुको महत्वपूर्ण तीर्थस्थलका प्रयागहरु मध्ये आदिप्रयाग देवघाट धाम भएको विद्वानहरुले बताएका छन । यहाँको प्राचीन भग्नावशेष मणिमुकुन्दसेनद्वारा निर्मित मन्दिरहरू र चक्रवर्त्तिशीला हो ।
सिद्धबाबा गलेश्वर ब्रह्मचारिद्वरा स्थापित आश्रम र वेदवेदांग विद्यालय हो । अन्य आश्रमहरूमा महेश आश्रम, हरिहर आश्रम आदि रहेकाछन् नवलपरासीतर्फ मौलाकालिका माईको मन्दिरका साथै थुप्रै मन्दिरहरू रहेका छन् । यहाँ गैर आवासीय नेपाली सँघले एक ठूलो वृद्धाश्रम बनाइदिएको छ, त्यस्तै अन्य वृद्धाश्रम पनि याँहा रहेका छन।
यहाँ बस्ने मानीसहरूको जीवनको अन्त्यतिर धर्म प्राप्तीका लागि जान लालायीत हुने गर्दछन ।
देवघाटमा एकातिर मृत्यु संस्कारका कार्य सम्पन्न हुन्टन् भने अर्कोतर्फ सन्यास जीवन व्यतित गर्नका लागि वृद्दवृद्दाहरु आश्रममा बसेका छन् । घरबार भएका, धनसम्पत्ति भएका, छोराछोरी, नाति नातिना भएका र सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिहरु समेत जीवनको अन्तिम वर्षहरुमा प्राकृतिक वातावरणमा भगवानको चिन्तन मनन गर्दै मोक्ष प्राप्तीका लागि यी आश्रममा बसेको पाइनछ ।
याे पनि पढ्नुस एउटा लडाइँ जिते, सम्पूर्ण युद्ध जित्न बाँकी छः अध्यक्ष प्रचण्ड
त्यही देखेर प्रचण्डले पनि राजनीतिक भागदौडको जीवन परित्याग गरेर शान्तिपूर्वक देवघाटमा बस्न मन भएको कुरा त्यहाँ भ्रमणमा गएको बेला गत वर्ष गरेका थिए । देवघाट पुग्ने बित्तिकै साँच्चिकै सबै कुरा छोडेर त्यही बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना जोकोहीको मनमा आउँछ ।
यसपटक पनि पोखरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको चर्चा गर्दा प्रचण्डले उनको उमेर सक्रिय राजनीति हैन, शान्तिपूर्णरुपमा चिन्तन मनन, ध्यान र योग गर्दै बस्नुपर्ने अवस्था भएकोतर्फ इंगित गरेका हुन । देवघाट जानुपर्ने भन्ने कुरा आर्यघाट जानुपर्ने भन्ने अर्थमा प्रचण्डले भनेको देखिदैन । बरु बृद्ध भइसकेपछि राजनीतिक भागदौड भन्दा पर रहेर अध्यात्मिक चिन्तन मननमा रमाउन उनले पौडेललाई सुझाव दिएका थिए ।
तर नेपाली समाज न पर्यो, प्रचण्डका भनाईलाई बंग्याएर अहिले उनीविरुद्ध आलोचना चुलिएको छ । तर एकपटक जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले पनि देवघाट घुम्न जाउन त ? त्यहाँ पुगेपछि जो कोहीको पनि मनमा आउँछ– आहा, सबै छोडेर देवघाट मैं बस्न पाए त ?
ट्याग्स: देवघाट, प्रचण्ड